ikhofi ye-inkjet egcwele okuzenzakalelayo China Manufacturer
Incazelo:Iphrinta yomshini wekhofi,Umshini wephrinta we-Chocolate,Iphrinta ye-inkjet ephelele yokuzenzekelayo
Home > Imikhiqizo > Iphrinta yokudla > I-Chocolates iphrinta > ikhofi ye-inkjet egcwele okuzenzakalelayo
ikhofi ye-inkjet ephelele ye-inkjet yekhofi yephrinta ye-photo 2017I-digital digital latte yobuciko inezici eziningi ezinamandla. Kungaphrinta ubuso bomakhasimende noma amagama abafuna ukuwaveza phezu kwekhofi / isinkwa / amabhisikidi. Ukushicilela imininingwane ebusweni kwikhofi kuyindlela emisha yokwenza ubuciko be-latte, kusho ukuthi akudingeki usebenzise isikhathi esiningi sokufunda nokusebenzisa ubuciko be-latte, udinga ukuthatha isithombe bese iphrinta izoqeda umshini wokuphumula wephrinta wokuphumula
Umshini wokushicilela umshini wekholethi uholela kumamodeli amasha amabhizinisi amasha, okungaba ukugqama okukhulu kakhulu kwezicelo eziningi ekhishini elisebenzayo, i-catering, i-confectionaries, i-café nama-bakeries. iphrinta ephelele ye-Inkjet iphinde iklanyelwe ukugqugquzela, ukujabulisa, imfundo, nokuveza ubuciko kokubili abancane nabadala ekhaya, ekhaya labahlengikazi kanye nemfundo ye-3d yephrinta yekhekhe ezikoleni.
Izinkomishi ezingu-6 ngesikhathi esisodwa i-Digital coffee Printer Xhumana Nanje
I-Refinecolor Ikhomishini yekhofi edlayo Xhumana Nanje
Iphrinta yomshini wekhofi Umshini wephrinta we-Chocolate Iphrinta ye-inkjet ephelele yokuzenzekelayo Iphrinta yezinkomishi zekhofi Iphrinta yomshini we-Ripple Umshini Wephrinta Lomshini Wekhofi Iphrinta yekhofi A4 Iphrinta ephrinti e-Efi